ရထားဖြင့်ဝယ်ရန်သည်ဥရောပမှာတော့အကောင်းဆုံးမြို့ကြီးများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ရထားဖြင့်ဝယ်ရန်သည်ဥရောပမှာတော့အကောင်းဆုံးမြို့ကြီးများ
နယူးအတွေ့အကြုံများနယ်လှည့်များအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကများမှာ. သို့သျောလညျး, တစ်ခါတစ်ရံတစ်ဦးတိုးရစ်-ဖော်ရွေမျက်မှောက်တစ်ဦးစျေးဝယ် network ပေါ်ကိုတက်လာတဲ့တစ်ဖယောင်းတိုင်ကိုင်လို့မရပါဘူး, အဘယ်သူမျှမကိစ္စကိုဘယ်လိုအထင်ကြီး. စျေးဝယ်များအတွက်သွားရောက်ကြည့်ရှုသူတွေကိုဒီအသိရကြ, သူတို့အသုံးစရိတ်သဘောထားတွေကိုတိုက်ဖျက်မည်နိုင်သောနေရာနှင့်ဥရောပထဲမှာမြို့ကြီးများ၏ပဒေသာကံကောင်းထောက်မစွာရှိပါတယ်.
သို့သျောလညျး, သို့ ပိုပြီးပိုက်ဆံ နှင့်စွမ်းအင်စျေးဝယ်များအတွက်ထွက်ခွာ, အဲဒါကိုအကောင်းတစ်စိတ်ကူးင် စျေးပေါခရီးသွားလာ ဒါပေမယ့်အစာရှောင်ခြင်း. ရထားစျေးဝယ်များအတွက်ဥရောပအကောင်းဆုံးမြို့ကြီးများမှရယူခြင်းသူတို့အားအခြေအနေများနှစ်ခုစလုံးပြည့်. ရဲ့အဓိကစျေးဝယ်ခရီးစဉ်အချို့ကိုကြည့်ကြပါစို့နှင့်သင်မည်သို့ရထားရှိရနိုင်:
အမ်စတာဒမ်အများအပြားအရာများအတွက်လူသိများသည်, နှင့်၎င်း၏စျေးဝယ်စင်တာများသူတို့ထဲကတဝတည်းဖြစ်ကြ၏. အဆိုပါမြို့စျေးဝယ်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးကမ်းလှမ်း, သင့်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ဘယ်လောက်ကြီးမားပေါ် မူတည်.. သငျသညျအခြို့သော upscaling စျေးဝယ်ရှာနေခဲ့လျှင်, အဆိုပါ P.C. Hoofstraat သင်တို့အဘို့အလမ်းဖြစ်ပါသည်. ဌာနစတိုးဆိုင်များနှင့်စျေးဝယ်စင်တာများအဘို့, သငျသညျ De Bijenkorf ထိမှန်နိုင်, မဂ္ဂနာပလာဇာသို့မဟုတ် Kalvertoren.
သငျသညျတခါမှာအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောစတိုးဆိုင်များနှင့်စတိုင်များကိုတွေ့ကြုံခံစားချင်တယ်ဆိုရင် de Negen Straatjes သို့မဟုတ်အဆိုပါကိုးလမ်းများကိုလည်းစျေးဝယ်အဘို့ကြီးသောများမှာ. သငျသညျကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ် ရထားအမ်စတာဒမ် အလွယ်တကူအရှိဆုံးအဓိကဥရောပမြို့မြို့တို့မှ, ပဲရစ်စ်နှင့်ကိုပင်ဟေဂင်အပါအဝင်.
မီလန်အတွက်စျေးဝယ်, စျေး ၀ ယ်ခြင်းအတွက်ဥရောပရှိအကောင်းဆုံးမြို့များအတွက်အီတလီသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖက်ရှင်ရွေးသူဖြစ်သည်
ဖက်ရှင်၏မြို့တော်လို့သတ်မှတ်ခံရတဲ့အတွက်မီလန်ကိုစျေးဝယ်ခြင်းအတွက်ဥရောပရဲ့အကောင်းဆုံးမြို့တွေထဲမှာထည့်သွင်းထားတယ်. သို့သျောလညျး, မီလန်မဟုတ်မှသာအကြောင်း အဆိုပါဖက်ရှင် အဆိုပါ Duomo ဧရိယာထဲမှာ high-လမ်းပေါ်မှာဖက်ရှင်. လေ့လာစူးစမ်းဖို့အများကြီးအခြားနေရာများတွင်ရှိပါတယ်, Brera ခရိုင်၏ artsy ဆိုင်များမှ Navigli inရိယာအတွင်းရှိလွှမ်းမိုးမှုရှိသောလွှမ်းမိုးမှုများအထိ. မီလန်အမှန်စျေးဝယ်သူရဲ့ပရဒိသုဖြစ်ပါသည်. သငျသညျကစိတ်ဝင်စားနေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျမှသွားလာလို့ရပါတယ် မီလန်ကိုအလွယ်တကူရောမမြို့ကနေရထားနဲ့, ဗင်းနစ်, အဖြစ်ဥရောပရှိအခြားမြို့ကြီးများ.
အတွေ့အကြုံရှိစျေးဝယ်ဇူးရစ်ကိုချစ်, ယင်း၏စျေးအကြီးဆုံးစတိုးဆိုင်ရဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်သူတို့သည်အထူးသဖြင့်. ကအများဆုံးလိုမြို့ကြီးပြထက်ကွဲပြားခြားနားသောခံစားရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဇူးရစ်စျေးဝယ်များအတွက်ဥရောပအကောင်းဆုံးမြို့ကြီးများတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါ Sihlcity စျေးဝယ်စင်တာနှင့်ကုန်တိုက် Glatt သင်ဖြစ်နိုင်ဖို့အသုံးပြုနေကြီးမားတဲ့ကုန်တိုက်ကြီးတွေမဟုတ်ကြ, ဒါပေမယ့်သူတို့တစ်တွေအရည်အသွေးမြင့်လက်လီပူဇော်ပြုပါ အတှေ့အကွုံ.
အခွားသောမှတ်သားလောက်သောဟော့စပေါ့ဟာ Bahnhofstrasse ပါဝင်သည်, Europaallee, Langstrasse ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ဧရိယာ, သငျသညျခငျြအထူးသဖြင့်လျှင် ဆွစ်ဇာလန်ထုတ်စစ်ဆေး နှင့်မြို့ပြဒီဇိုင်း. ရထားအဲဒီမှာရယူခြင်းဘာလင်ကနေလွယ်ကူသည်, မြူးနစ်, ဗီယင်နာ, နှင့်အခြားအဓိကဥရောပမြို့ကြီးများ.
ဘာလင်သငျသညျလုနီးပါးဘာမှရှာတှေ့နိုငျရှိရာ၎င်း၏ကြီးမားသောလက်လီခရိုင်နှင့်အတူစျေးဝယ်များအတွက်ဥရောပအကောင်းဆုံးမြို့ကြီးများတစျဦး၏ခေါင်းစဉ်ကိုအပြစ်လွှတ်. နက်ရှိုင်းအိတ်ကပ်နှင့်အတူသူတို့အဘို့, Kurfurstendamm သို့မဟုတ် "Ku'damm" ဟုမဖြစ်မနေ-အလည်အပတ်ခရီးဖြစ်ပါတယ်, တစ်ဦးတင်းကျပ်တဲ့ဘတ်ဂျက်နှင့်အတူသူတို့အားခြောလိမ့်မည်နေစဉ် ခရီးစဉ်ကိုခံစား အဆိုပါ Tauentzienstrase မှ. တစ်ဦးလူကြိုက်များအဖြစ် ဥရောပခရီးလမ်းဆုံး နှင့်အဓိကမြို့, ဘာလင်ရထားကိုအလွယ်တကူလက်လှမ်းမှီဖြစ်ပါသည် ဥရောပ၌များစွာသောအခြားမြို့များမှ.
Antwerp ထူးခြားတဲ့စျေးဝယ်ပညာရှိစေသောအရာတစျခုက၎င်း၏ကမ္ဘာကျော်စိန်ခရိုင်ဖြစ်ပါတယ်. သို့သျောလညျး, Antwerp ဒီဇိုင်နာကင်းမဲ့နှင့်မ စပျစ်သီးကိုစျေးဆိုင်, ရှေးဟောင်းစတိုးဆိုင်များသို့မဟုတ်စည်ကား စျေးကွက် ဖြစ်စေ. ဒါဟာအားလုံးစျေးဝယ်ဖို့ထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံကိုပေးနိုငျ, ပင်သူတို့အားနှစ်သက်ခက်ခဲဖြစ်ကြောင်း. သငျသညျကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ် ရထား Antwerp ဘာလင်ကနေ, ပဲရစ်, ဥရောပနှင့်အခြားမြို့များ.
ဥရောပအကောင်းဆုံးမြို့ကြီးများအချို့အချို့အကြီးစျေးဝယ်များအတွက်အဆင်သင့်? သင့်ရဲ့ခရီးစီစဉ်, နှင့် သင့်ရဲ့ရထားလက်မှတ်တွေစာအုပ်ဆိုင် စောစော!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-cities-europe-shopping-train%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/in_routes_sitemap.xml, သငျတို့သ / က de သို့မဟုတ် / ru နှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများဖို့အတွက် / ပြောင်းလဲနိုင်သည်.
#traveleurope europetravel စျေးဝယ် ရထား